वर्ल्डलिंकले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने — Bhugolnews
वर्ल्डलिंकले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले एक वर्षभित्रमा मुलुकका १० हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने भएको छ।
कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार आगामी एक वर्षभित्र देशभरिका १० हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक केशव नेपालले जानकारी गराए। वर्ल्डलिंकले अहिले तीन हजार ठाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सेवाग्राहीले एकपटकमा ‘लगइन’ गरेपछि करीब एक घण्टा ३० मिनेट निःशुल्करूपमा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन्। कम्पनीले पर्यटकीय क्षेत्र, बजारका मुख्यमुख्य स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।
यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्‍याएको वर्ल्डलिंकले सन् २०२२ सम्म सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी गराए।
इन्टरनेट विस्तार गर्ने क्रममा वर्ल्डलिंकले चार महिनामा करीब एक लाख जनालाई सेवा सुविधा विस्तार गर्ने तयारी रहेकोसमेत उनले जानकारी गराए। विसं २०५२ मा स्थापना भएको मुलुककै पुरानो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकका अहिले दुई लाख ८० हजार सेवाग्राही रहेका छन्। तीन वर्षअघिसम्म कम्पनीका ३५ हजार मात्र सेवाग्राही रहेका थिए। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेपालले दुर्गम क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट पुर्‍याउन क्षमतासमेत विस्तार गरिएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुसहित अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा समेत यस वर्ष उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइन्छ। यस्तै एक वर्षभित्रमा दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा समेत आफ्नो इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उनले जानकारी दिए। -रासस
दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द गरिने
फेसबुक डाउन हुँदा टेलिग्रामलाई भयो फाइदा
फेसबुकमा क्विज खेल्नुहुन्छ ? सावधान ! ६० हजारभन्दा धेरै डाटा चोरी
एलजीले तन्काउन मिल्ने फोन बजारमा ल्याउने घोषणा